Global Voices teny Malagasy » Manandratra ny fimaroana ara-piteny afrikana antserasera amin’ny alalan’ny fifandimbiasana fitantanana kaonty Twitter · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Marsa 2019 5:51 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Naomy
Ravaka mashup namboarin'i Avila, nampiasa n ikônina vorona avy amin'i Sara Novovitch, ES, Ikônina Afrika avy amin'i Nikita Kozin avy amin'ny tetikasa Noun, ary ny ikônina fizarana avy amin'i Alequinho avy ao amin'ny Noun Project, ary ny programa cloud Word It Out.
Manomboka ny faha-20 ny volana marsa ka mandra-pahatapitry ny taona 2019, hifandimby ireo Afrikana mpikatroka nomerika ara-piteny amin'ny fitantanana ny @DigiAfricanLang , kaonty Twitter iray vaova manasongadina ny anjara azon'ny teknolojia sy ny aterineto atao amin'ny fampiroboroboana sy ny famelomana indray ireo fiteny ao amin'ny kaontinanta afrikana. Tanjona iray lehibe amin'ny fanentanana Twitter ny hankatoavana ny fanolorantenan'ireo Afrikana manao araka izay tratrany amin'ny karazana fampitam-baovao sy media an-tserasera mba hivoahan'ny fiteny sy ny kolontsaina an-tserasera ary hisarika taranaka vaovao mpieny azy.
Ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny Tetikasa Anarana Yoruba  sy ny Global Voices amin'ny fiteny Yoruba , ny Rising Voices no handrindra ny fandraisana anjara amin'ny fanentanan'ny mpikatroka mihoatra ny 40 manerana ny kaontinanta, izay mifanandrify tamin'ny Taona Iraisampirenena amin'ny Fiteny Vazimba Tompotany .
Raha ny Twitter no mampiatrano, hizara ny fahalalàna anatiny sy ny fitsinjovany ny fiteny afrikana ny mpandray anjara fanentanana, tafiditra ao anatin'izany ny tantarany, ny fampiasana azy amin'izao fotoana eo amin'ny fiainana andavanandro sy antserasera, ireo fanamby sy ireo tetipanorona amin'ny famelomana imaso indray. Raha manana anjara toerana lehibe ny teknolojia, dia ampahany amin'ny zavamisy manodidina ihany no miantraika amin'ny fahalasaman'ny fiteny zanatany.
Izao fanentanana izao dia manara-dia ilay mitovitovy aminy, ilay fanorenan'asa mahomby mizotra any Amerika Latina amin'izao fotoana izao amin'ny kaonty Twitter @ActLenguas . Efa fanaon'ny Rising Voices hatry ny ela ny fanohanana ireo mpikatroka nomerika ao Amerika Latina, ary ity fanentanana vaovao ity no hanampy amin'ny fampidirana ny ezaka mitovy amin'izany ao amin'ireo Afrikana mpikatroka.
Anisan'ireo efa handray anjara amin'ny fanentanana ireo olona miasa aminy ny fiteny Yoruba, Igbo, Swahili, ary Twi amin'ny alalan'ireo sehatra tahaka ny Wikipedia, fampiasa sy lalao fianarana, tetikasam-pandikanteny, rakibolana an-tserasera, famangitana fampiasam-piarovana nomerika, ary ireo fanentanana media sosialy hafa. Jereo eto raha hijery ny lisitra voalohany amin'ny mpandray anjara.
Raha niteraka aingam-panahy amin'ireo fanorenan'asa tahaka ny @IndigenousX ao Aostralia izao tetikasa media sosialy izao, ka nanoloran'ny mpanorina ny @IndigenousX, Luke Pearson, taridalana ilaina amin'ireo dingana hodiavina, dia efa nifandimbiasana notantanin'ny mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina tahaka izao ihany koa ny kaonty Instagram an'i Global Voices ary fomba tsara dia tsara ho an'ny mpikambana hizara izay tsikaritra mila lazaina amin'ireo toerana onenan-dry zareo.
Raha maro amin'ireo mpandray anjara no hisioka amin'ny teny anglisy, dia mitady fandraisana anjara avy amin'ny mpikatroka any amin'ny faritra isan-karazany, toy ny any Afrika Andrefana sy Afrika Avaratra izay tsy voatery ho teny anglisy ny teny iraisampirenena ifandraisana izahay.
Azonao atao ny manohana ity fanentanana ity amin'ny alalan'ny fanjohiana ny kaonty @DigiAfricanLang  mandritra ny taona 2019, sy amin'ny alalan'ny fampitàna ny hafatra hitanao ho mahaliana na mety hampisy aingam-panahy. Miandry fatratra amin'ny fiandrasana domberina ihany koa ny mpampiatrano ary hanao izay tsara indrindra azony atao hamaliana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/20/136273/
 Tetikasa Anarana Yoruba: http://yorubaname.com/
 Global Voices amin'ny fiteny Yoruba: https://yo.globalvoices.org
 Taona Iraisampirenena amin'ny Fiteny Vazimba Tompotany: https://en.iyil2019.org/
 amin'ny kaonty Twitter @ActLenguas: https://rising.globalvoices.org/blog/2019/01/15/a-year-long-rotating-twitter-campaign-will-share-the-voices-of-50-indigenous-language-digital-activists/